समुदायको अग्रसरतामा समाधान भयो खानेपानीको समस्या
सोनी न्हेम्हाफुकी, प्रशिक्षार्थी संवाददाता December 15, 2018
भक्तपुर । भक्तपुर किवाचोकका स्थानीयले आफ्नै मेहनतमा आफ्नो बस्तीमा रहेको पिउने पानीको समस्या समाधान गरेका छन् । समुदायको पहलमा १ सय ९५ घरधुरीलाई आवश्यक पानीको जोहो भएको छ ।
भिटामिन डी को मात्रा कसरी मिलाउने ? (अडियोसहित)
सृजना बराल, काठमाडौं । September 29, 2018
शरीरमा भिटामिन डीको कमि भए मांसपेशी दुख्ने, हड्डी दुख्ने, हड्डीको समस्या हुने, बालबालिकाहरुमा तालुमा कमाल नआउने, गर्भवती महिलाहरुको बच्चा नै अपाङ्ग जन्मन सक्ने खतरा पनि रहन्छ ।
सुर्खेतमा १७ शैयाकाे फिस्टुला उपचार केन्द्र सञ्चालन
लिलप्रकाश चन्द September 25, 2018
स्वास्थ्य मन्त्रालय र यूएनएफपीएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २ सयदेखि ४ सय जना महिलामा फिस्टुलाको समस्या देखिने गरेको छ । केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै पश्चिम नेपालका महिलाले फिस्टुलाको सजिलै उपचार गराउन सक्ने क्षेत्रीय अस्पतालका प्रमुख, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डम्बर खड्काले बताउनुभयो ।
बर्सेनि २ लाख ५० हजार नागरिक हेपाटाईटिसबाट प्रभावित
स्नेहा कर्ण July 29, 2018
नेपालको कुल जनसंख्याको ०.९ प्रतिशत अर्थात् करिव २ लाख ५० हजार मानिसहरु बर्सेनि हेपाटाईटिस रोगका कारण प्रभावित हुने गरेका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा दैनिक २५ जना हेपाटाइटिसका बिरामी आउने गरेका छन् । डा.शेरबहादुर पुनका अनुसार बिगतका वर्षहरुको तुलनामा हेपाटाइटिसका बिरामीको सङख्या बढ्दै गईरहेको छ ।
मौसमी रुघाखोकीले हरेक वर्ष एक करोड मानिस प्रभावित (अडियो)
स्नेहा कर्ण, काठमाडौं । April 12, 2018
विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरुलाई यसले बढी असर गर्दछ ।
३ सय किशोरी एकैदिन नयाँ भूमिकामाः रेडियोमा बहसमुलक कार्यक्रम चलाउदै
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराब नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्लान इन्टरनेशनलको सहकार्यमा म बालिका भएकाले भन्ने नाराका साथ छैठौं अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाउन लागिएको हो ।
टाउकोमा सिउरिने जमरा एक-फाइदा अनेक
आज दशैको टीका जमरा लगाएर मान्यजनबाट आशिस थाप्ने दिन । सामान्यता हामी जमरा लगाएपछि फाल्छौं अथवा कतै राख्छौं । समग्रमा त्यसको सदुपयोग गर्दैनौ तर तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, जमरा क्यान्सरलगायतका रोगको औषधी पनि हो ।
मासु कति र कसरी खाने ? (अडियोसहित)
केशव भुल, काठमाडौं । September 28, 2017
सामान्यतया दशैंमा अरु बेलाभन्दा बढी मासु खाइन्छ । मासुलाई पोसिलो खानेकुराका रुपमा लिइन्छ । मासु प्रोटिनको राम्रो स्रोत भए पनि मिलाएर खाना नजान्दा त्यसैले ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ ।
बाढी पहिरोले देशभर ३३ जनाको मृत्यु, कयौं बेपत्ता
बाढी पहिरोका कारण देशभर ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सीआइएनसँग कुरा गर्दै दिनुभएको जानकारीअनुसार कयौं बेपत्ता भएका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाए अनुसार आज दिनभर अविरल वर्षा हुनेछ ।
अशक्त आमाको सहारा दृष्टिविहिन छोरा
अनिश शर्मा गैरे, रेडियो पुष्पाञ्जली, गुल्मी August 8, 2017
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा एक यस्तो परिवार छ, जहाँ आमा दृष्टिविहिनसँगै पक्षघात रोगी पनि र उनको हेरचाह गर्ने छोरा पनि दृष्टिविहिन । दुवैलाई अरुको भर चाहिने हो तर कोही छैनन् ।